May 22, 2020 - Hargeele - Wararka Somali State
Somali News May 22, 2020
Efforts aim to share COVID-19 info, help in St. Cloud’s Somali-speaking community Minnesota Public Radio NewsSii akhriso
Soomaaliya May 22, 2020
Muqdisho(SONNA)-Wasiirka Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadaha JFS oo maanta shir-jaraa’id ku qabtay magaalada Muqdisho, ayaa, ayaa ka hadlay war-bixin ku saabsan saameynta cudurka COVID-19 uu ku yeeshay Ganacsiga iyo Dhaqaalaha Soomaaliya, waxaana uu sheegay in war-bixintu ay muujinayso in badeecadihii ay dawladdu u sameysay cashuur-dhaafka uu hoos-u-dhacay Sii akhriso
Cayaaraha May 22, 2020
(Germany) 22 Maajo 2020. Xiddiga Borussia Dortmund ee Jadon Sancho ayaa ah da’yarka loogu doonista badan yahay suuqa kala iibsiga suuqa xagaagan, iyadoo Manchester United ay tahay kooxda sida ugu badan loola xiriirinaayo. Man United ayaa lagu soo warramayaa inay Sancho u bandhigtay qandaraas cajiib ah, waxaana sidoo kale ay miiska u saareen xirashada lambarka […]Sii akhriso
KARACHI(SONNA)-At least eight people were killed as a Pakistan International Airlines (PIA) plane with 107 passengers onboard crashed in southern port city of Karachi on Friday, officials and local media reported. The flight PK-8303, travelling from northeastern Lahore city crashed near Jinnah International Airport while landing, the Civil Aviation Authority confirmed in a Sii akhriso
(Spain) 22 Maajo 2020. Wargeyska La Gazzetta dello Sport ayaa ku warramaya in laacibka khadka dhexe kaga ciyaara kooxda Barcelona ee Arthur Melo uu diyaar u yahay inuu hir-galo heshiiska is dhaafsiga ah ee ay kooxaha Barca iyo Juventus ku doonayaan inay isku weedaarsadaan 23-jirkan iyo Miralem Pjanic. Laacibka reer Brazil ayaa lala xiriirinayay inuu udub […]Sii akhriso
Mogadishu(SONNA)- Somalia officially started evacuating its citizens from abroad after waiting for a month or more due to the closure measures to combat Corona virus, while the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation called upon the returnees to adhere to the instructions of the Ministry of Health and Social Care. The permanent secretary of […]Sii akhriso
(Yurub) 22 Maajo 2020. Halyeyga reer Brazil iyo kooxda kubadda cagta Barcelona ee Rivaldo ayaa sheegay in weeraryahanka naadiga Borussia Dortmund ee Erling Håland uu gaari karo heerka de Lima Ronaldo, isagoo dhinaca kale tilmaamay inuu bandhig fiican sameyn doono marka uu u dhaqaaqo inuu ka ciyaaro horyaalka La Liga ee dalka Spain. Magaca Erling Håland Sii akhriso
(Yurub) 22 Maajo 2020. Wargeyska “Daily Mirror” ee dalka England ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in laacibka reer Gabon iyo kooxda Arsenal ee Pierre-Emerick Aubameyang uu dalab kaga yimid naadiga Paris Saint-Germain. Pierre-Emerick Aubameyang oo 30 jir ah ayaa ku biiray kooxda Arsenal inta lagu gudi jiray suuqii kala iibsiga jiilaalka ee 2018, wuxuuna Sii akhriso
Shaqooyinka May 22, 2020
Muqdisho.(SONNA)…Kulanka ay yeesheen guddiga qaran ee ka hortaga cudurka covid-19 oo ahaa qaab muuqaal ah oo loo adeegsaday Mareegta Internet-ka ah ayaa waxaa diiradda lagu saaray qiimeyn ku saabsan saameynta uu dalka ku yeeshay safmarka Covid19 iyo hoos u dhaca ka muuqda heerka faafidda cudurkaasi. Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Sii akhriso